FreedomBox, YunoHost na Plex: 3 Ọmarịcha nyiwe iji chọpụta | Site na Linux
FreedomBox, YunoHost, na Plex: 3 Ezigbo nyiwe iji chọpụta
N'oge ndị a nke Ọgbaghara covid-19 na Nkewapụ iche mmadụ (iche iche), ndị hụrụ Teknụzụ, Teknụzụ Ozi na Mgbakọ, họrọ ịrara oge ha nye nyocha, gụọ, mụta maka, nwalee ngwa dị iche iche ma ọ bụ nyiwe mmụta, ntụrụndụ ma ọ bụ ọrụ dị iche iche, iji bulie ma ọ bụ melite ya arụpụta ihe ma ọ bụ izu ike n'oge oge ntụrụndụ ndị a.
Yabụ, n'ime akwụkwọ a ka anyị ga-eme ka a mata 3 na-akpali nyiwe na yiri akporo na ebumnobi, na-akpọ FreedomBox, YunoHost na Plex; nke ahụ ga-abara ọtụtụ ndị uru na oge ga-abịa n'etiti ọnọdụ a ga-ekwe omume, ogologo oge zuru ụwa ọnụ.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na taa karịa mgbe ọ bụla, ojiji nke las nyocha dijitalụ, nke ahụ bụ, nke ndị ahụ ngwọta dị n'ịntanetị (n'ịntanetị) nke na-ekwe ka ogbugbu otu ma ọ bụ karịa ọrụ (ọrụ, ngwa, mmemme) dị iche n'otu ebe ahụ na ịntanetị Iji gboo mkpa dị iche iche, ha dị ezigbo mkpa na-eme ka ndị mmadụ na-arụ ọrụ, na-arụsi ọrụ ike, ma ọ bụ nwee obi ụtọ n'ụlọ ha.
Na nke ọ bụla na-enwekarị ma ọ bụ na-enye atụmatụ, ọrụ ma ọ bụ uru dị iche iche, na-enyere ndị ọrụ ha ma ọ bụ ndị otu aka, aka dozie ụdị nsogbu ma ọ bụ mkpa dị iche iche, n'ụzọ akpaghị aka na iji obere ihe omume.
Otú ọ dị, ụfọdụ n'ime ndị a nyiwe ma ọ bụ ihe ngwọta, maka n'efu na / emeghe, nwere ike itinye na ya ụlọ ma ọ bụ saịtị nkeonwe nke ndị ọrụ ya, ịbụ sooro ndị ọzọ nọ n'obododị ka a ọrụ efu ma ọ bụ nke azụmahịa. Ihe 3 anyị ga-enyocha n’okpuru na-elekwasị anya na ụdị a.
1 3 ezigbo nyiwe inyocha taa
3 ezigbo nyiwe inyocha taa
Dị ka Ebe nrụọrụ gọọmentị FreedomBox, a kọwara ya dị ka:
"Ihe nkesa nzuzo nke ndị na-abụghị ndị ọkachamara na-enye gị ohere ịwụnye ma hazie ngwa nkesa na ntanetị ole na ole. Ọ na-arụ ọrụ nke ukwuu nke gị ẹdude ma ọ bụ họọrọ ọnụ ala ngwaike, njikọ internetntanetị, na nkịtị ike oriri, na bụ n'okpuru gị akara. FreedomBox bụ Free na Open Source Software na akụkụ gọọmentị nke Debian, nkesa GNU / Linux nke ọma. Ihe oru ngo a bu ndi FreedomBox na-abaghi ​​uru".
Ndị mmepe ya kwere nkwa ịbụ:
"Iwulite ngwanrọ maka ngwaọrụ smart nke ebumnuche injinia bụ ịrụkọ ọrụ ọnụ iji kwado nkwukọrịta n'efu n'etiti ndị mmadụ, na nchekwa na nchekwa, karịrị ebumnuche nke ike kachasị ike ịbanye n'ime ha. FreedomBox na-ewu mmegharị iji wepụta weebụ. Ndị ọrụ anyị bụ ndị ọsụ ụzọ nke otu a. Anyị bụ akụkụ nke nnukwu obodo Software na-anabata ma anyị na-anabata onye ọ bụla".
Yabụ na nkenke, OnyinyeBox ekwesiri itule:
"Ihe oru ngo uwa nile inye ndi mmadu ike ichikota ikike nke ihe nelu Intanet. Ihe ngwọta nke na-enye ndị ọrụ ya ohere izere ntinye data, ime nnyocha na nyocha site na silos nke etiti na-egosipụta webụ taa. A Platform wuru site na sava weebụ, nke bụ nke onwe, ọnụ ma jikwaa, nke mere na onye ọrụ nwere ike ịnabata ọrụ weebụ dị mkpa n'ụlọ na ngwaọrụ nke ihe onwunwe ha, kwadoro site na ngwanrọ na-enweghị ego ha nwere ike ịtụkwasị obi.".
Dị ka YunoHost gọọmentị saịtị, a kọwara ya ná nkenke:
"Sistemụ arụmọrụ nke na-achọ ime ka onwe gị nweta ohere ịnweta mmadụ niile".
Agbanyeghị, dịka ndị mmepe ya siri kwuo, ha kọwara nke ọma ihe ọ bụ:
"Sistemụ arụmọrụ nke na-achọ nchịkwa kachasị mfe nke ihe nkesa, yabụ na-achịkwa nchịkwa onwe onye, ​​ma na-ahụ na ọ ga-anọgide bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi, nke nwere nchebe, nke ọma na nke dị nfe. Ọ bụ ọrụ ngwanrọ na-enweghị nnwere onwe nke ndị ọrụ afọ ofufo na-elekọta. Tekinoloji, enwere ike ihu ya dika ihe nkesa nke Debian GNU / Linux ma tinye ya na otutu ngwaike.".
Banyere Wiki Yunohost, ọ dị mkpa iburu n'uche na a na-ewere ya dị ka:
"Akụrụngwa nke dị obere, nke a na-anwaleghị n'ọtụtụ buru ibu ma yabụ ọ nwere ike ọ bụghị nke kachasị nke ọma maka ọtụtụ narị ndị ọrụ n'otu oge ahụ".
Plex Media Server, dị ka aha ahụ pụtara, bụ azịza doro anya nke Nkesa Multimedia Server ile ma ọ bụ iyi (kesaa) ọdịnaya ọ bụla nke ọdịnaya dị n'etiti ụdị ngwaọrụ dị iche iche. Yabụ, ọ bụ ngwa anyị nwere ike iji tụgharịa kọmpụta ọ bụla n’ime Multimedia Center (Media Center) site na ọdịnaya dijitalụ nke anyị tinye n'ime ya ka ejiri ya.
Plex Media Server jikwaa faịlụ multimedia a site na ịchọpụta na ịhazi ha n'okpuru akụkụ dị iche iche, dịka ngalaba ma ọ bụ edemede, iji melite ohere na oriri ha. Ihe kpatara ya, ọtụtụ ndị na-ahụ ya, dịka ngwa nwere ike iulatingomi ihe okike nke a Homelọ Netflix ma ọ bụ nkeonwe, nke ga-enwe katalọgụ ọdịnaya ọtụtụ ahaziri iche.
N'ikpeazụ, ọ dị mma ịkọba nke ahụ Plex Media Server ọ dakọtara na usoro kachasị vidiyo na ọdịyo. Na mgbakwunye, ikwe ka ịhazi nke anyị ọdịnaya site na ụdị faịlụ (vidiyo, foto na egwu)na nke encrypt mpụga njikọ, ma ọ bụrụ na ojiji ma ọ bụ ohere dịpụrụ adịpụ, n'etiti ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na arụ ọrụ arụ. O nwekwara ọrụ dị n'ịntanetị, enwere ike ịnweta ya n'efu ma kwụọ ụgwọ, site na ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a 3 magburu onwe ntanetị ọrụ ntanetị, «FreedomBox, YunoHost y Plex» n'oge ndị a nke «Pandemia por el COVID-19» y, «Aislamiento social (Cuarentena)»; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » FreedomBox, YunoHost, na Plex: 3 Ezigbo nyiwe iji chọpụta
Nicolas Solano Conde dijo
Otu isiokwu naanị gosipụtara uru ya ezughi oke. Ọ dị mkpa iji gosipụta erughị eru na ụzọ enwere ike isi gbanwee ha, ma ọ bụ ọghọm ma ọ bụ jiri ha tụnyere ihe dịka ụwa nke ngwanrọ akwụ ụgwọ….
Zaghachi Nicolás Solano Conde
Ekele, Nicolás! Daalụ maka okwu gị. N'ezie, n'oge na-adịghị anya, anyị ga-ekwu banyere nke ọ bụla iche, gaa na nkọwa ndị ka mma na ndị na-adịghị mma, ma nye atụnyere. Maka ugbu a, ọ bụ iji gbasaa ha ka ọtụtụ ndị mmadụ mara banyere ha.
Edemede na-adọrọ mmasị, mana anyị kwesịrị ịbanye miri emi… M ga-elekwasị anya na sava ndị dị mfe iji na ole na ole òké clicks dị ka Syncloud ma ọ bụ Freedombox ma ọ bụ ndị ọzọ…. ma n'ọnọdụ Plex na-ekwu maka Jellyfin maka ịbụ ihe mepere emepe ...
Ekele m, Martí! Daalụ maka okwu gị. Ozi mgbe e mesịrị, anyị kwuru banyere Jellyfin, dịka ị pụrụ ịhụ na nke a na-esote post: https://blog.desdelinux.net/jellyfin-que-es-sistema-instalacion-usando-docker/
Imirikiti antivirus nwere ike inwe nkwarụ site na njikọ ihe atụ
Editor Bluefish: Odi ohuru nke 2.2.11 di na obere ndozi